တမူထူးခြားတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ သူမရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို စွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မျက်ဝန်းရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဗီဒီယိုလေး – Ever Best
By EverBest MPosted on May 6, 2021 March 15, 2022
မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော် ။ မော်ဒယ်လ်လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သူမ က တော့ ဆိုရှယ် media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များ ကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှုကွန် ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ ရပါတယ် ။
ပုံလေးတွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမ က တော့ ခပ် ချေချေ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေးကို ” ပြောပါများလို့ ရိုးသွား တဲ့ အထဲမှာ ကိုကိုနဲ့ ဖုန်းပြောတာ မပါဘူး လို ဆိုတဲ့ ” caption လေးတဲ့ တင်ပေး လာတာပဲဖြစ် ပါတယ် နော် … . ၊၊ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေး တွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါတယ် နော် … .
ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကကို ဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ားအျပားရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ပါတယ္ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈ ရရွိထားတဲ့သူမ က ေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာကမွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ား ကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾကတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈကြန္ ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာေတြ႕ ရပါတယ္ ။
ပုံေလးေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိနဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမ က ေတာ့ ခပ္ ေခ်ေခ် ရိုက္ထား တဲ့ ပုံေလးကို ” ေျပာပါမ်ားလို႔ ရိုးသြား တဲ့ အထဲမွာ ကိုကိုနဲ႔ ဖုန္းေျပာတာ မပါဘူး လို ဆိုတဲ့ ” caption ေလးတဲ့ တင္ေပး လာတာပဲျဖစ္ ပါတယ္ ေနာ္ … . ၊၊ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္းရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးရင်ခုန်ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် အလန်းစား ပုံစံလေးနဲ့ Tik Tok ဆော့ပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယို
Next post ကိတ်လွန်းလှတဲ့ လျှို့ဝှက်အလှလေးတွေကို ပေါ်လွင်နေအောင် အမိုက်စားလေးရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုချပြလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ